कँडेल पक्ष आफैँले लियो एनआरएनए युकेको कार्यकारी अधिकार
लण्डन । पूर्व सहमतिअनुसार एनआरएनए युकेका अध्यक्ष योगेन क्षेत्रीले पद हस्तान्तरण नगरेपछि सहअध्यक्ष महेन्द्र कँडेलले आजदेखि आफूले कार्यकारी अधिकार लिएको घोषणा गरेका छन् । गतवर्ष दुई ध्रुवमा विभाजित एनआरएनए युकेलाई एकतावद्ध बनाउन दुवै पक्षको...
बाबुरामका राज्य पुनर्संरचनाको विकल्पहरु?
पूर्व प्रधानमन्त्री तथा संवैधानिक राजनीतिक सवाद तथा सहमति समितिका सभापित बाबुराम भट्टराईले सहमितका लागि विकल्पका रुपमा १०, ९ र ८ वटा प्रदेशको खाका अघि सारेका छन् । समितिको बैठकमा राज्य पुनर्संरचना, शासकीय स्वरुप र...
दूतावासको ५० लाखको गेट वर्ष दिनमै बिग्रियो
लन्डन – राजदूत फेरिएपिच्छे भवन बिक्री प्रकरणले चर्चामा आइरहने लन्डनस्थित नेपाली दूतावास साँच्चिकै नमुना छ । जीर्ण भवन मर्मतमा रकम अभाव भनिरहँदा वर्षेनी आउने करिव तीन करोड रुपैयाँ ‘वालुवामा पानी’ जस्तो त्यसै विलाउँछ ।...
प्रम कोइराला ब्रसेल्समा
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला तीन दिने युरोप भ्रमणको क्रममा सोमबार बेल्जियम पुगेका छन्। संयुक्त राष्ट्र संघको ६९ औ महासभामा भाग लिएर कोइराला सोमबार बेल्जियम पुगेका हुन्। ब्रसेल्सस्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कोइरालाको स्वागत युरोपेली संघका लागि...
दूतावासको दशैं राजनीतिक दल र सामाजिक संस्थाहरुद्धारा बहिष्कार ?
लण्डन । बेलायतस्थित नेपाली दूतावासले आइतबार आफ्नै भवनमा राखेको ‘बडा दशैँ शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम २०७१’ मा न्यून नेपाली सहभागी भएका छन् । कार्यक्रममा लण्डनस्थित राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु, एनआरएनए यूके पदाधिकारीहरु र विभिन्न सामाजिक...
एनआरएनए यूकेको भविष्य के होला आजबाट ?
लण्डन । झण्डै दुई चिरा भएर एकतामा बाँधिएको गैर अावासीय नेपाली संघ बेलायतमा नेतृत्व हस्तान्तरणको लागि सहअध्यक्ष महेन्द्र कँडेलले अध्यक्ष योगेन क्षेत्रीलाई अन्तिम आव्हान गर्ने भएका छन् । आज सोमबार राति १२ बजेसम्म अध्यक्ष...
धादिङमा २ बस ठोकियो, ५ जनाको मृत्यु
काठमाडौ। धादिङमा सोमबार बिहान भएको सडक दुर्घटनामा ५ जनाको मृत्यु भएको छ। काठमाडौंबाट काकड्भिट्टातर्फ जाँदै गरेको ना ५ ख ४३८४ र म्याग्दीको बेनीबाट काठमाडौंतर्फ आउँदै गरेको ना ३ ख ७६३३ नम्बरको बस बिहान करिब...
यसरी मिल्यो चाल्टर्न समाजको भांडभैलो
लण्डन । चाल्टर्न नेपाली समाज बेलायतको अध्यक्षमा रोमनाथ पाण्डे सर्वसम्मत चयन भएका छन् । चाल्टर्न नेपाली समाज बेलायतले संचालनमा ल्याएको नेपाली कक्षाको संयोजकमा सुरज केसीलाई दिने ‘भित्री सहमति’ बनेपछि अध्यक्षमा पाण्डे सर्वसम्मत चयन भएका हुन् । स्रोतका अनुसार,...
सङ्घीय समाज बेलायतकाे अध्यक्षमा तामाङ
लण्डन । सङ्घीय समाजवादी पार्टीको बेलायतस्थित भातृ सँस्था सङ्घीय समाज बेलायतको अध्यक्षमा धर्मबहादुर तामाङ निर्वाचित भएका छन् । समाजको प्रथम महाधिवेसनले तामाङको अध्यक्षतामा २९ सदस्सीय नयाँ समिति चयन गरेको हो । समितिको उपाध्यक्षहरुमा जङ्ग...
अदालतले अपराधी पुष्टि गरेमात्रै बेलायतले रुद्र आचार्य फर्काउने
काठमाडौं। कार्यवहाक प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बामदेव गौतमले कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्याका आरोपी मध्येका एक रुद्रप्रसाद आचार्यलाई सुपदर्गीका लागि प्रक्रिया नपुगेको जवाफ बेलायत सरकारले दिएको बताएका छन् । संसदका साजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा आइतबार...
इन्चोन एशियाड: पुरुष क्रिकेट टोली क्वाटरफाइनलमा
काठमाडौं । इन्चोन एसियाडमा नेपाली क्रिकेट टोली आइतबार भएको खेलमा माल्दिभ्सलाई हराउँदै क्वाटर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। समुहगत चरणको दोस्रो खेलमा नेपालले माल्दिभ्सलाई सात विकेटले पराजित गर्‌यो । बुधबार नेपालले अफगानिस्तानसँग क्वाटरफाइलमा प्रतिस्पर्धा गर्ने...
एकैसाथ छ वटा कलमले लेख्छन् धनगढीका मनोज
धनगढी । सामान्यतयाः मानिसले दायाँ हातले लेख्ने गर्छन् । कसैले बायाँ हातले पनि लेखेको देखिन्छ । तर नेपालका एक युवकले आफ्नो मुख, दुईवटै हातखुट्टा र कुहिनामा एकसाथ छवटा कलम च्यापेर खरर उल्टो र सुल्टो...
« अघिल्ला 1 … 1,551 1,552 1,553 1,554 1,555 … 1,576 पछिल्ला »